ओली : कांग्रेस प्रचण्ड पथमा लागिसक्यो, अब एक्लैले एमालेसँग चुनाव लड्न सक्दैन
बिहिबार, मंसिर २, २०७८ ९:३१
नेपाल अनलाइन पत्रिका – काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस अब एक्लैले एमालेसँग चुनाव लड्न नसक्ने बताएका छन् । बुधबार नेपालगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले सो कुरा बताएका हुन् । ***यो समाचारको भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
कांग्रेस प्रचण्ड पथमा लागिसकेको बताउदै ओलीले अब एमालेसँग एक्लै चुनाव लड्न नसक्ने दाबी गरे । उनले भने काँग्रेस त प्रचण्ड पथमा गयो गयो, काँग्रेस त प्रचण्ड पथमा लागिसक्यो
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पुरानो इतिहास बनाएको काँग्रेस अहिले हराउँदै र बिलाउँदै गएको ओलीको भनाई छ । उनले भने – ‘कहाँ छ विपी कोइरालाको काँग्रेस ? गणेशमानको काँग्रेस, कहाँ छ कृष्णप्रसाद भट्टराई हुँदाको काँग्रेस ?अहिले त प्रचण्डले जे अह्रायो त्यहीँ’
उनले भने – ‘चार हात टेकेर हिडेको कांग्रेससँग एमालेसँग एक्लै चुनावमा लड्ने दम छ ? सक्छ एमालेसँग एक्लै लड्न काँग्रेसले ?’
एमालेप्रति जनताको आकर्षण दिनानुदिन बढ्दै गएको बताउदै ओलीले सरकारले गरेको काम र एमालेको नीति विचारको आधारमा पार्टीप्रति जनलहर बढेको दाबी गरे । उनले भने एमाले सम्पूर्ण जनताको साझा पार्टी भएकाले सही विश्लेषण र निष्कर्षका साथसाथ साथीहरू पार्टी प्रवेश गर्नुभएको छ
आफू प्रधानमन्त्री हुँदा विकासको लहर ल्याएर विश्वसामु चिनाएको दाबी गर्दै ओलीले नेपाल तीव्र ढङ्गले विकास गर्ने विश्वका १० देशको सूचीमा परेको बताए ।